360 – ညုခရီးသွားအပေါ် Flatboat goby
ဒီ post ဖြစ်တယ် #4 ၏4"စီးရီးအတွက်360°ကျူတိုရီရယ်” (ချဲ့ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ) Google က Street View ဓါတ်ပုံတောင်းဆို, ကင်မရာကိုပခုံးအမြင့်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နေရာချခံရဖို့ကြောင်း. Möchte… ဆက်ဖတ်ရန်
အောက်မှာ Filed 360, အကူအညီ / tutorials
လမ်းမြင်ကွင်း: သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် 360 °ဓါတ်ပုံတွေကိုပိုကောင်းအောင်နှင့်ပေါင်းစပ်. တွင်2သိသိသာသာမိနစ်ရလဒ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်. Ein kleiner Mini Workshop für die Local Guides Connect
ဒီ post ဖြစ်တယ် #3 ၏4"စီးရီးအတွက်360°ကျူတိုရီရယ်” (ချဲ့ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ) ဒီနေရာတွင်သေးငယ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါသည်, ငါနေဆဲထွက်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်. Im ersten Teil geht es… ဆက်ဖတ်ရန်
Tagged google, maps, လမ်းမြင်ကွင်း
Rainers Seiltrick – 360အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါး IPhone ကိုပိုင်ရှင်များအတွက်မြင်ကွင်းကျယ်° So bekommt Ihr den Tennisplatz richtig abgelichtet.
သူတို့က Daniela play
ငါတို့သည်ဤအချက်တစ်ဦးမင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်မှာသင်တို့ရှိသမျှဆန္ဒရှိချင်ပါတယ်. အမြဲတမ်းလက်ကျယ်ပြန့်ရေ Keel အောက်မှာ. Wilfried & Daniela